Oromo Free Speech: Barruun “Kanniisa” gaggeessuf qophaaye
May 17, 2015 Oromia
Walaleessee kan dubbisu—-Kumsaa dha
Kaayyon isaa ————- Uummata Oromoo akka filmaata kanarratti “KFO/MAADIRAK” filatu, filmaata booda akka warri diinaa qabxii argame dhoksanii irraa hin fudhane akka bakka hundaatti eeggatan gorsuufi. Tokkummaan keenya akka jabaatufi.
Yaadannoon isaa——- Ilmaan Oromoo yeroo kan tokkummaa dhabuu keenyarraan kan ka’e rakkina nutti dhufe jalaa baqatanii biyyaa bayanii biyyoollessa biraatti rakkina hedduuf saaxilamaniifi. Isaan mana hidhaatti dararamaniifi.
Kabajamtootaa, waan danda’aniin wal gargaarun yeroo hundumaa barbaachisaadha. Biyya keessas tayee biyya Ormaa, bakka jirru hundatti akka lammii keenya cinaa dhaabannee, carraa argame hundatti fayyadamnee mirga keenyaf lolannu isi nin gaafadha.
Posted by Oromo firee speech at 9:14 AM